NAV Sustained Engineering Team Blog: KB articles for Microsoft Dynamics NAV 4.0 SP3 ERP Application - Dynamics CRM: Blogs - AXForum
NAV Sustained Engineering Team Blog: KB articles for Microsoft Dynamics NAV 4.0 SP3 ERP Application
02.08.2007, 10:35 #1
23,391 / 794 (73)
Since the release of Microsoft Dynamics NAV 4.0 SP3 we have released the following knowledgebase (KB) articles (PartnerSource Login credentials are required):
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]1.	[/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB940206 – Apply[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]2.	[/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB934132 – Bank Account[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]3.	[/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB924268 – Blanket Orders[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]4.	[/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB926349 – Blanket Orders[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]5.	[/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB932268 – BOM[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]6.	[/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB933009 – BOM[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]7.	[/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB939711 – Business Analytics[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]8.	[/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB929696 – Business Notification[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]9.	[/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB927354 – Costing[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]10. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB935713 – Credit Memo[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]11. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB930384 – Drop Shipment[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]12. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB934029 – Exchange Rate[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]13. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB930317 – Export to Excel[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]14. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB935724 – General Journal[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]15. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB930322 – Import from Excel[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]16. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB930388 – Intercompany[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]17. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB934156 – Item Journal[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]18. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB923670 – Item Tracking[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]19. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB934145 – Item Tracking[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]20. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB934568 – Item Tracking[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]21. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB933695 – Order Planning[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]22. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB937583 – Order Planning[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]23. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB937512 – Overdue Payments[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]24. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB936466 – Partial Payments[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]25. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB932272 – Payment Discount[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]26. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB937506 – Payment Discount[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]27. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB937183 – Payments[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]28. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB937507 – Payments[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]31. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB936561 – Planning Worksheet[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]32. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB939379 – Post Code[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]33. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB929931 – Production Orders[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]34. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB934129 – Production Orders[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]35. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB936538 – Production Orders[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]36. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB937582 – Production Orders[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]37. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB939384 – Production Orders[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]38. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB926250 – Production Schedule[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]39. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB934127 – Purchase Invoice[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]40. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB928389 – Purchase Order[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]41. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB930124 – Purchase Order[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]42. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB931516 – Reminders[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]43. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB932261 – Reports[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]44. [/color]KB935717 – Reports[color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"][/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]45. [/color]KB937027 – Reports[color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"][/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]46. [/color]KB939000 – Reports[color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"][/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]47. [/color]KB939378 – Reports[color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"][/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]48. [/color]KB939837 – Reports[color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"][/color]
49. KB933693 – Req. Worksheet
50. KB935723 – Req. Worksheet
51. KB936467 – Req. Worksheet
52. KB939261 – Req. Worksheet
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]53. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB921079 – Sales Order[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]54. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB930944 – Un-Apply[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]55. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB937025 – Un-Apply[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]56. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB940154 – Un-Apply[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]57. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]933131 – UPGTK[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]58. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]936485 – UPGTK[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]59. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB930391 – VAT[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]60. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB930591 – VAT[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]61. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB934150 – VAT[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]62. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB937022 – VAT[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]63. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB937268 – VAT[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]64. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB929348 – Warehouse[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]65. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB929958 – Warehouse[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]66. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB930125 – Warehouse[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]67. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB932953 – Warehouse[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]68. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB933670 – Warehouse[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]69. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB933677 – Warehouse[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]70. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB933696 – Warehouse[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]71. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB934149 – Warehouse[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]72. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB934512 – Warehouse[/color]
[color=" black msobidifontfamily Calibri msofareastfontfamily Calibri msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]73. [/color][color=" black msobidifontfamily #39Times New Roman#39 msofareastfontfamily #39Times New Roman#39 msofareastlanguage DA msoasciifontfamily Calibri msohansifontfamily Calibri"]KB936088 – Warehouse[/color]
This blog will be updated as new KB articles for the Microsoft Dynamics NAV 4.0 SP3 C/AL application are released.
Note: It requires a developer license to change C/AL code in Microsoft Dynamics NAV. It is highly recommended to have the changes evaluated and implemented by a Microsoft Dynamics NAV partner.